| December 6, 2012 | Hits:35
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ဖိုးလုံး December 6, 2012 - 2:34 pm	မသိလို့မေးပါရစေ ဧရာဝတီရေ…။ နိုင်ငံတကာက သနားတယ်လို့ပြောနေကြပြီး လက်တော့မခံချင်ကြတော့ အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားဟင်? ကျုပ်တို့နားလည်တာကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ကနေ မြန်မာပြည်ထဲကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ခိုးဝင်လာပြီး ဒေသခံရခိုင်တွေဆီမှာ နေခွင့်တောင်း၊ ပြီးမှလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားအောင်ကြိုးပမ်း။ အဲ..အင်အားလည်းများလာရော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုဟင်ဂျာ လို့အမည်တပ်။ ဒေသခံရခိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်။ ရခိုင်တွေကပြန်တိုက်ခိုက်တော့ နိုင်ငံတကာကိုငိုပြ။ မူဆလင်တွေကိုနှိပ်ကွပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး အစွန်းရောက်ရော၊အစွန်းမရောက်ရော မူဆလင်တွေရဲ့ဖိအားတွေကိုအသုံးချ။ ရခိုင်ပြည်ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အစ္စလာမ္မစ်ပြည်ထူထောင်ဖို့ တောင်း။ မရတော့မှ ဒုတိယခြေလှမ်းအဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းသားဆိုပြီး ဖြစ်ခွင့်တောင်း။ အဲဒါမှမရသေးရင် တတိယအနိမ့်ဆုံးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားလေးတော့ ဖြစ်ပါရစေဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆင်ကြံကြံ ကြံနေကြတဲ့သူတွေကို ရည်ညွှန်းတာလားဟင်?????